Navigraph Wuxuu Heshaa SimBrief
Navigraph, oo ah illaha lagu kalsoon yahay duulimaadka bulshada ee ilaha kalsoonida ee jaantusyada la cusbooneysiiyay iyo xogta hagitaanka, ayaa maanta ku dhawaaqay inay heleen SimBrief, oo ah barnaamijka qorsheynta duulimaadka bulshada ugu caansan bulshada duulimaadyada.
La wareegistu waa horumar dabiici ah oo iskaashi durba ka dhexeeyey Navigraph iyo SimBrief. Waxay ku dhisan tahay isdhexgalka labada madal ee jiray ilaa 2013 waxayna bixisaa awooda lagu sameeyo qorsheynta duulimaadka iyadoo la adeegsanayo ilaa iyo hadda xogta hagitaanka.
Shaqada qorsheynta duulimaadka SimBrief waxay sii ahaan doontaa bilaash. Isticmaalayaasha doonaya inay isticmaalaan xogta ugu dambeysa ee hagista waxay ku qori karaan Navigraph waxayna furi karaan wareegyada AIRAC ee SimBrief, sidii hore.
Aasaasaha SimBrief Derek wuxuu qabtay shaqo aad ufiican abuurista adeega qorshaynta duulimaadka ee bulshada jilitaanka duulimaadku ay jecelyihiin. ” ayuu yidhi Magnus Axholt, agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkadda Navigraph. "Waxaan qorsheyneynaa inaan isku darno SimBrief iyo Navigraph xitaa inbadan oo aan awood u siino howlo dheeri ah SimBrief iyadoo la adeegsanayo xogta iyo ilaha Navigraph ay hayso."
“Derek wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa sidii aan u horumarin lahayn qaar ka mid ah astaamaha jiilka soo socda wax soo saarka Navigraph Charts. Isugeynta awooda leh ee asalka duulimaadkiisa adduunka dhabta ah iyo khibradiisa horumarinta softiweerka, Derek waa xubin aad loo soo dhaweynayo kana tirsan Kooxdayada Horumarinta Navigraph ee xirfadda iyo anshax marinta leh.
"Waxaan ka dhigi doonnaa waxqabadka qorsheynta duulimaadka 'SimBrief' mid xitaa u sahlanaan kara kuwa horumariya bulshada dhexdeeda annaga oo qaabeyneyna SimBrief API iyo Navigraph APIs ee Navigraph Developer Portal soo socota." Magnus ayaa soo koobaya.
"Navigraph wuxuu ahaa taageere xoogan oo SimBrief ah bilowgiiba." Derek ayaa intaa ku daray. Waxaan marwalba ku riyaaqay la shaqeynta iyaga si loo wanaajiyo isdhaxgalka labada adeeg. Tani waxay aad u dareemaysaa sida horumarka dabiiciga ah, waana ku faraxsanahay inaan qeyb ka noqdo kooxda horay u socota. ”
Isaga oo hadalka sii wata ayuu yidhi, "Waxaan ku kalsoonahay in khayraadka Navigraph iyo kooxda khibradda u leh horumarka ay kaliya gacan ka geysan doonin in la hubiyo in SimBrief ay u sii diyaar tahay bulshada sanadaha soo socda, laakiin ay sidoo kale u sameyso waxyaabo cusub oo xiise leh iyo horumarinno aan si kale ahayn suurto gal. ”
"Waxaan labaduba is-hoosaysiiyey oo aan si aad ah ugu mahadnaqay taageerada ay bulshadu ii muujisay tan iyo markii aan bilaabay SimBrief ku dhowaad sideed sano ka hor, waxaanan rajaynayaa cutubkan soo socda ee horumarinta SimBrief." Ayuu yidhi Derek oo xidhay.
SimBrief wuu ku sii shaqeyn doonaa magaca SimBrief, laakiin wuxuu la socdaa calaamada taleefoonka "Navigraph".